Didier Drogba oo ku soo wajahan kooxda Chelsea haddii uu tago macallin Maurizio Sarri – Gool FM
(London) 15 Juunyo 2019. Sida wararku ay sheegayaan Didier Drogba ayaa ku soo wajahan kooxda kubadda cagta Chelsea haddii uu ka tago macallinka haatan ee Maurizio Sarri.
Frank Lampard ayaa la warinayaa in loo magacaabi doono macallinka cusub ee Chelsea, waxaana la sheegayaa in xiddiga reer England inuu shaqaalaha kooxda ku soo dari doono Didier Drogba.
Laacibkan khadka dhexe, kaasoo 700 oo kulan u saftay kooxda intii uu u ciyaarayey, ayaa halka sare kaga jira tababareyaasha bedelka u noqon doona macallin Maurizio Sarri haddii uu ka tago, kaasoo si weyn loola xiriirinayo Juventus.
Sida uu warinayso Wargeyska The Sun, wahadallada ayaa socda, iyadoo Lampard uu iminka u muuqdo mid ku soo laabanaya garoonka Stamford Bridge halkaasoo uu ka ciyaari jiray muddo badan, waxaana kooxda Derby County ay u muuqataa mid haatan aqbashay in Lampard uu dib ugu laabto Blues.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in haddii uu kooxda Chelsea yimaado Lampard uu Drogba ka dhigi doono macallinka Weeraryahnnada, sidoo kalena waxaa la filayaa inuu Shay Given ka soo kaxaysan doono Derby si uu uga dhigo macallinka goolhayeyaasha.
Jody Morris ayaa la filayaa in loo magacaabi doono caawiyaha macallinka kooxda Chelsea, laakiin waxaan halkaan boos ka heli doonin John Terry kaasoo ku faraxsan xilka uu ka hayo kooxda soo dallacday ee Aston Villa.
Xulka qaranka gabdhaha Netherlands oo xasuuqay dhiggooda Cameroon kulan ka tirsan Koobka Adduunka ee Dumarka… + SAWIRRO